अबदेखि लेमिनेशन गरेको बोरामा सिमेन्ट प्याकिङ गर्नुपर्ने ! - Pokhara News
अबदेखि लेमिनेशन गरेको बोरामा सिमेन्ट प्याकिङ गर्नुपर्ने !
पोखरा न्यूज – २६, असार । स्वदेश तथा विदेशमा उत्पादित सिमेन्ट लेमिनेशन गरेको बोरामा प्याकिङ गरेर मात्र बजारमा पठाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी सिमेन्टलाई लेमिनेशन गरेको बोरामा प्याकिङ गरेर मात्र बजारमा पठाउन सिमेन्ट उत्पादक सङ्घलाई आग्रह गरेको छ ।
यसपालिको भाइटीकाको शुभ साइत ११ः५५ बजे
ललितपुरमा रोकिराखेको २ बसमा आगलागी
२० वर्षदेखि कोठामा थुनिएका युवाको उद्धार, उपचारका लागि पोखरा ल्याइयो
आजको राशिफल : कार्तिक ०४ गते सोमबार
आगलागीबाट पक्की घर जलेर नष्ट, ८० लाख क्षति